Nkenke nyocha banyere ọrụ César Vallejo | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ọrụ uri nke César Vallejo
Foto - Wikimedia / Enfo
Vallejo Ọ bụ otu n'ime ndị edemede kachasị mkpa nke narị afọ XNUMX, ọ bụghị naanị na obodo ya, Peru, kamakwa na ụwa ndị ọzọ na-asụ Spanish. Ọ gụrụ ụdị edemede dị iche iche, ọkachasị ama ama ya bụ abụ. N'ezie, ọ hapụrụ anyị akwụkwọ atọ nke abu ndị ahụ akara oge, nke anyị ga-atụle n'isiokwu a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ọrụ uri nke nnukwu onye edemede a, mgbe ahụ anyị ga-agwa gị gbasara ọrụ uri ya.
1 Nwa ojii
3 Ekele ndi mmadu
4 Curiosities nke César Vallejo
Nwa na-ekwuputa ...
Akwụkwọ ahụ Nwa ojii ọ bụ nke mbụ onye na-ede uri dere. O mere ya n’afọ 1915 na 1918, ọ bụ ezie na e bipụtaghị ya ruo 1919 n’ihi na onye dere ya tụrụ anya mmalite nke Abraham Valdelomar, ihe na-emezughị.
Nchikota abu nke edere ya na uri iri isii na itolu nke e kere uzo isii na mgbakwunye na abụ nke mbụ akpọrọ "Onye isi ojii" nke bukwa onye nyere akwukwo aha ya. Ndị ọzọ ahaziri dị ka ndị a:
Ogwe agile, na mkpokọta abu 11.
Iche, na 4 poems.
Site na ala, ya na abu 10.
Imperial Nostalgia, nke e dere na 13 poems.
Gbè eluigwe, ebe e nwere abụ 25 (ọ bụ ngọngọ kachasị).
Egwu si n'ụlọ, nke mechiri ọrụ ya na poems 5.
Nchịkọta nke mbụ nke abụ nke César Vallejo na-enye a mmalite nke onye edemede n'onwe ya ebe ọ bụ na ụfọdụ n’ime uri ndị ahụ kwekọrọ na ọgbara ọhụrụ na ụdị nke mgbe ochie na ụdị egwu, ya bụ, ịgbaso usoro nke ihe guzobere. Ma yensusuw akwan abiɛsa a yebetumi afa so de nhoma yi adi dwuma wɔ asɛnka mu no ho nhwɛ.
Otutu isiokwu di iche-iche kpuchitere, tinyere onwu, okpukpere chi, mmadu, ndi mmadu, uwa ... niile site n’echiche onye ode akwukwo
N’ime ede nile n’akwụkwọ a, nke kacha wee mara aha na nke a na-enyocha bụ nke na-akpọ ọrụ ahụ aha ya, "Nwa ojii."
Trilce (Akwụkwọ edemede ...
Akwụkwọ ahụ trilce ọ bụ nke abụọ César Vallejo dere na tupu na mgbe ọ gbasara gbasara nke mbụ. Oge edere ya, mgbe nne ya nwụsịrị, enweghị ịhụnanya na mkparị, ọnwụ enyi ya, ọnwụ nke ọrụ ya, yana oge ọ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ mere poems ndị bụ akụkụ nke akwụkwọ ahụ bụ ihe na-adịghị mma, na mmetụta nke enweghị mwakpo na ime ihe ike niile onye ọdee ahụ biri.
Nchịkọta uri a nwere ngụkọta nke abụ 77, ọ dịghị nke ọ bụla bu aha, kama ọ bụ naanị ọnụ ọgụgụ ndị Rom, nke dị iche na akwụkwọ ya gara aga, nke onye ọ bụla nwere aha ya ma kee ya otu. Kama, tinyere trilce onye ọ bụla nwere onwe ya na ibe ya.
Banyere usoro uri ya, o nwere ihe oji mara ihe a maara banyere onye na-ede uri. N'okwu a, pụọ na n anyomi ma ọ bụ mmetụta ọ bụla ọ nwere, ọ na-ewepu onwe ya na metrik na rhyme, ma na-eji omenala, mgbe ụfọdụ okwu ochie, nke na-eme ka o sie ike nghọta. Na mgbakwunye, ọ na-emebe okwu, na-eji okwu sayensị na ọbụlagodi okwu ndị a ma ama.
Ede ndị a bụ nke hermetic, ha na-akọ akụkọ mana na-ekweghị ka mmadụ hụ n’okpuru ha, dị ka a ga-asị na ọ ga-amata akara n’etiti ihe ọha mmadụ bụ na onye ode akwụkwọ bụ. Ahụmahụ ya niile n’oge ọ dere ọrụ a na-eme ka ha jupụta na mgbu, nhụjuanya na mmetụta nke ibu iro megide ndị mmadụ na ndụ.
Ekele ndi mmadu
Uche mmadu ...
Posthumously, akwụkwọ Ekele ndi mmadu E bipụtara ya na 1939 gụnyere ihe odide dị iche iche nke onye na-ede uri site na 1923 na 1929 (Poems in prose) yana nchịkọta uri «Spain, wepụ chalice a n'ebe m nọ».
Kpọtụrụ, ọrụ a nwere ngụkọta nke 76 poems, 19 nke bụ akụkụ nke Poemas en prosa, akụkụ ọzọ, 15 ka ọ bụrụ nke ziri ezi, site na nchịkọta poems Spain, wepụ m chalice a n'ebe m nọ; ma ndị ọzọ ga-abụ ihe kwesiri ekwesi.
Akwụkwọ ikpeazụ a bụ otu n'ime nke kacha mma site na César Vallejo ebe a "hụrụ ebe niile" onye ode akwụkwọ nwetara ka oge na-aga ka ọ kacha mma karịa nke o jiri karịa akwụkwọ ndị gara aga bipụtara.
Ọ bụ ezie na isiokwu ndị Vallejo na-eme na abụ ya maara maka ihe ndị o mepụtara n'oge gara aga, nke bụ eziokwu bụ na enwere ọdịiche n'ụzọ ọ na-esi egosipụta onwe ya, ọ dị mfe ka onye na-agụ ya ghọta, n'adịghị ka ihe mere Trilce, akwụkwọ ozi ya gara aga.
N’agbanyeghi n’ederede a ka nwere nkọwa banyere afọ ojuju nke ndụ site n'aka onye edemede, Ọ bụghị dịka "enweghị nchekwube" dịka ọ dị n'ọrụ ndị ọzọ, mana ọ na - ahapụ otu olile anya, dịka a ga - asị na ọ chọrọ ịmetụta mmadụ niile ka mgbanwe nke ụwa wee bụrụ nke otu ma ọ bụghị n'otu n'otu. N'ihi ya, ọ na-egosi nro maka ụwa ekepụtara n'ụzọ jikọrọ ọnụ ma dabere n'ịhụnanya.
N'ịbụ onye nchịkọta nke ọrụ atọ dị iche iche, Poems na prose; Spain, nara m iko a; na ndị kwekọrọ na Eke ndi mmadu, eziokwu bụ na enwere obere ọdịiche dị n'etiti ha, na-egosipụta ọtụtụ iche iche dị ka nkanka ha na-ezo aka.
Curiosities nke César Vallejo
Gburugburu onu ogugu nke César Vallejo enwere otutu ihe omuma banyere ya. Otu n’ime ha bụ nke ahụ onye uri a nwere nkwenye nke okpukpe N'ihi na nne na nna ya na nna nne ya bụ ndị okpukpe. Nke mbụ dị ka ụkọchukwu Mercedarian si Spain, na nke abụọ dị ka onye okpukpe Spanish nke gara Peru. Ọ bụ ya mere na ezinụlọ ya ji okpukpe kpọrọ ihe nke ukwuu, ya mere, ụfọdụ n'ime uri odee ahụ ji amaokwu okpukpe ha ama.
N’ezie, a na-atụ anya na onye edemede ahụ ga-agbaso nzọụkwụ nke nne na nna ya ochie, mana n’ikpeazụ ọ tụgharịrị gaa uri.
A maara na Vallejo na Picasso zutere ọtụtụ oge. Ihe kpatara na onye na-ese akwụkwọ Spanish na onye na-ese ihe osise sere eserese atọ nke César Vallejo amabeghị, ọ bụ ezie na ọ nwere nghọta, n'okwu Bryce Echenique, na ha abụọ dabara na Café Montparnasse, na Paris na, ọ bụ ezie na ha amaghị nke ọ bụla ọzọ Mgbe Piccaso matara banyere ọnwụ Vallejo, o kpebiri ịse foto ya.
E nwere echiche ọzọ, nke Juan Larrea dere, ebe mgbe onye ahụ na-ede uri gasịrị, na nzukọ ya na Picasso nwere, ọ kpọsara ya ozi ọma na mgbakwunye na ịgụ ya ụfọdụ n'ime uri ya, nke onye na-ese ihe tiri mkpu «Onye a ee na enye m na-eme Eserese ».
Poets enweghị ike ịbụ isi iyi nke mkpali maka ihe nkiri. Agbanyeghị, otu ihe ahụ anaghị eme na César Vallejo bụ onye ji mpako kpalie, site n'abụ ya "M sụrụ ngọngọ n'etiti kpakpando abụọ", na ihe nkiri swedish Abụ sitere n'ala nke abụọ (site na 2000), ebe eji agba edemede na mkpuru okwu si n’uri ahu.
Tụkwasị na nke a, ihe nkiri ahụ meriri Special Jury Prize na Cannes Film Festival.
Ọ bụ ezie na Vallejo bụ onye a kacha mara amara maka uri ya, eziokwu bụ na ọ gụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị edemede na ihe akaebe nke a bụ na a na-echekwa akụkọ, akwụkwọ akụkọ, edemede, ejije, akụkọ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Ọrụ uri nke César Vallejo
O doro anya na Vallejo bụ onye kasị mkpa abụ n'oge ya. Akwụkwọ ọrụ ya bụ ihe atụ nke oge anyị a, enwere ike iji ya dị ka usoro iji dozie nsogbu akụ na ụba anyị ugbu a.